Medjugorje: Fabiola, raara onwe ya nye na nke sexy, na-ekewa ndi ikpe nke x-factor | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Disemba 7, 2020
N'afọ gara aga Sista Cristina Scuccia meriri n'egwuregwu talent "Olu Italia"; afọ a Fabiola Osorio gosipụtara onwe ya n'ihu Skin, Mika, Elio na Fedez na-enwetaghị otu ihe ịga nke ọma mana ha na-achụpụkwa ndị ọka ikpe maka ịdị ọhụrụ nke ọgbụgba ama Onye Kraịst ya. Anyị gwara onye Mexico a dị afọ 22 nke ndụ ya na-agbanwe na njem ya na Medjugorje.
Ọ ga - ekwe omume inye akaebe nke okwukwe mmadụ, ọbụlagodi na telivishọn, n'ìhè, usoro ihe omume? Na ihu ọma, ọ dị ka ọ ga-ekwe omume n'oge na-adịbeghị anya. N’afọ 2014, Nwanne nwanyị Cristina Scuccia nwere ihe ịga nke ọma na mmemme “Voice of Italy” site n’ime ka ụlọ ezumezu niile gụọ Nna Anyị nke Bi n’Eluigwe. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ya ịrụ ụka, n'ihi ọnọdụ ya dị ka nwanyị e doro nsọ. N'afọ a, onye ọzọ na-ese ihe mere ya, onye na-eto eto bụ onye Mexico bụ 22 afọ, Fabiola Osorio, na usoro X-Factor. Na nkenke, nke ndị sonyere na-eme, tupu ha emee, Fabiola nwere nkwuwa okwu ịsị na ya zutere enyi ya nwoke na Medjugorje, na-atọ ọchị nke ndị ọka ikpe. Mgbe emechara egwu nke onye ọbụ abụ, onye gosipụtara ụdị ya kwesịrị ịdị na abalị niile, site n’aka AC / DC, otu n’ime ndị ọka ikpe kwuru na ọ tụrụ ya n’anya na otu nwaada nyefere nna anyị nwanyị Medjugorje nwere ike ịbụ abụ, nke ya kọwara otu sexy. Fabiola, n’igosi ụdị nkwenye nke onye kwere ekwe, buru ibu ma yi akwa mkpe, kwughachiri na ya aghọtaghị ihe kpatara na onye kwere ekwe enweghị ike inwe mmekọahụ. O kwughachiri ndị ọka ikpe ahụ: "Ihe dị mkpa bụ ihe dị gị n'obi". Nnukwu obi ike na okwukwe. Fabiola nwere, mgbe ọ rụchara ọrụ, mmetụta siri ike na ndị ọka ikpe abụọ Elio na Fedez, ebe ndị ọzọ abụọ, Mika na Skin ekwenyeghị na arụmọrụ ahụ. Ikekwe, n'ihi na ha achọpụtaghị ya n'ụkpụrụ, ọ ga-abụ n'ihi ihe o kwuru banyere Medjugorje? Amabeghị, agbanyeghị, ewepụrụ ya ịga n'ihu n'ọsọ ahụ. Onu ogugu onu ogugu, nke n’enweghi obi uto ndi gere ya n’ime ulo ahu, nke jiri olu ike gbaghaa nhoputa nke votu. A kpọghachiri Fabiola n'ọgbọ ahụ, mgbe obere ule nke abụ gachara, ọ tụgharịrị nsonaazụ mbụ nke votu ahụ, kwetara na nke abụọ. Anyị kọwapụtara na onye na-agụ egwú Mexico agaghị agafe agba ndị ọzọ ma wepụrụ ya na asọmpi ahụ. E buliri ya elu, n'agbanyeghị nke nwere akara zuru oke, maka obi ike ya n'ịgba àmà banyere okwukwe ya. Achọrọ m gaa hụ Fabiola na ekwentị, ka anyị kọọrọ ya akụkọ ya.
- Ndewo Fabiola, a hụrụ m vidiyo nke mgbasa ozi ahụ, ị ​​nwere nnukwu obi ike iwebata onwe gị dị ka onye ofufe na Medjugorje n'ihu ndị ọka ikpe. Gwa anyị gbasara onwe gị, gbasara akụkọ gị:
- Ya mere… ihe niile malitere mgbe m kpebiri ịga Medjugorje otu afọ dịka onye ọrụ afọ ofufo. Enwere m ntakịrị ihe dị n'ime, n'ime obi m, ọ dị ihe na-efu. Anọ m na-arụ ọrụ dị ka onye na-agụ egwú na Mexico ma na-amụ Graphic Design. Achọrọ m ịgbanwe ọnọdụ m, mana ndụ m. N’ihi ya, ekpebiri m ịhapụ Medjugorje.
- Ọbụghị njem ndị njem, ihe ị kwuru, ị na-achọ Udo nke obi gị. A njem uka nke rediscovery nke Okwukwe, ya mere.
N'ihi nke a, njem ahụ dị oke egwu ma juputa na ihe ndị a na-atụghị anya ya, ọbụnadị na ọ bụghị nke dị ụtọ. Na nkwụsị m na France, ndị uwe ojii gwara m ka m hụ tiketi nloghachi m, enwere m ya, mana ọ bụ maka otu afọ mgbe e mesịrị. Ha chere na m chọrọ ịnọ na France ịrụ ọrụ, ya mere, tụbara m n'ụlọ mkpọrọ. Bọchị ise n'ụlọ mkpọrọ, na-eche maka ikpe ahụ. Akọwara m ọnọdụ m. Na achọrọ m ịga Medjugorje iji rụọ ọrụ afọ ofufo, na achọrọ m ịmatakwu Lady anyị, n'ihi na enweghị m okwukwe dị ukwuu na Ya. Ha ekwetaghị m, m wee nọrọ n'ụlọ mkpọrọ.
- Mmalite, nke na-atọchaghị ụtọ, rutere France ma tinye ya n'ụlọ mkpọrọ! Gịnị mechara mee?
N'ụbọchị nke abụọ, ha kpọgara m na ọdụ ụgbọ elu ma gwa m na m ga-abanye ma laghachi Mexico. Achọghị m ma m jụrụ. Otu nwoke buru ibu, ọ bịakwutere m wee malite ịbara m mba dị ka: ị dị njọ! ị nọ ebe a n'ihi na ị merụrụ ahụ! Ha tụbara m ọzọ n’ụlọ mkpọrọ, mụ na mmadụ iri na anọ ndị ọzọ. Lọ mkpọrọ ahụ pere mpe, onye ọ bụla na-ebe ákwá, ụfọdụ bụ ndị kwabatara na-ezighi ezi, na-agba ọsọ agha ahụ. Jọ tụrụ m, mana inye m obi ike m bidoro gụọ egwu. Jọ tụrụ m, enwekwara m obere iwe, mana okwukwe nyere m obi ike, enwere m olile anya n'ime m!
- say sị na ụjọ tụrụ gị na iwe dịkwa obere, mana ị malitere ịgụ egwu! Nke a ó yighị ka ọ dịghị mma?
Kedu ihe m ga - eme! Ọ dabereghị na m, ihe m nọ na-enwe. Enweghị m ihe ọ bụla, ha wepụrụ ihe m niile, naanị m nwere olu m ma jiri ya mee ihe. Amaara m otú e si abụ abụ ma mee ka ndị ọzọ chịa ọchị, amaara m otú e si ege ntị. Nke a ka m gbalịrị imere ndị mụ na ha nọ n’otu ọnụ ụlọ mkpọrọ. Aghọtara m na ọ dịkwaghị mkpa ịga Medjugorje, n'oge ahụ ozi m nọ ebe ahụ, mụ na ndị ahụ nọ n'ụlọ mkpọrọ. N'ụbọchị ndị ahụ, amụtara m ọtụtụ ihe, ma eleghị anya ọ masịrị m, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị ịtụnanya. Mgbe ụbọchị ise gachara, a kpaghị m ikpe, ha enweghị ihe ha ga-ebo m, e nwere ihe ha mere mgbaghara. Ha gwara m na ihe niile dị n'usoro ma hapụ m ka m laa.
- Ya mere ijisiri ike pụọ ma gaa Medjugorje. Erutere ebe ahụ, gịnị mere? Olee otú i si bie ahụmahụ ahụ?
Ubochi m rutere Medjugorje, echetara m ya nke ọma. Ha nọ na-eche m na nnukwu ụlọ Nancy na Patrick, otu akwụkwọ nke ndị Canada nyefere onwe ha na ijere Chineke na Mary ozi. Agara m na kichin ma enwere Jospeh, di m n'ọdịnihu. Enwere m okwukwe dị ukwuu na ya ozugbo, ọ dị ka onye m nwere ike ịgwa okwu wee m wụpụ.
Eleghi anya, n'ihi na amaghị m onye ọ bụla na m nwekwara obere ụjọ (ịchị ọchị). Na Medjugorje, mmekọrịta mụ na Chineke bịara bụrụ nke chikwuru anya. Achọtara m onwe m, ọkachasị ọrụ kwa ụbọchị. Enwere m mmetụta na a hụrụ m n'anya ma pụọ ​​iche. Ọchịchọ m mgbe nile bụ ịhụ n'anya na inwe mmetụta nke ịbụ onye a hụrụ n'anya, n'ụzọ nke m, ọbụlagodi na egwu. Joseph ekedi ata eti ufan mi ke ntọn̄ọ, edi ke urua ama ekebe, enye ama ọnyọn̄. Ami, mma ndu do ke ọfiọn̄ iba efen. Mgbe ahụ, m ga-apụ n'ihi na ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya mba France emegharịghị visa m, m laghachiri Mexico. Anọgidere m otu izu na Italytali, ọ dịrị m mfe ịlaghachi ụgbọ elu. Jospeh nabatara m n'ụlọ ndị mụrụ ya, n'ime ezinụlọ ya ahụrụ m na Chineke nọ ebe ahụ na ọ dị ha mkpa. M ji nwayọọ nwayọọ hụ ya n'anya, nwa nwoke nwere nnukwu obi. Anọgidere m Italytali nanị otu izu, emesịrị m laghachi ụgbọ elu m laghachi Mexico. - Akụkọ gị akwụsịghị n’ebe ahụ, ahụrụ m na ọ nọ na X-Factor. Ma eleghị anya, ọ malitebeghị.
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ọ bịara leta m na Mexico. N’oge ahụ ọ nọrọ n’obodo m, m kpebiri ịbịa Italytali gụọ akwụkwọ. N'Italytali, m zutere ihe ngosi X-Factor, ọ bụ ohere m ịbụ abụ n'ihu ọha ma edebanye aha m.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ha kpọrọ m maka nyocha ahụ, n'ezie nyocha ahụ, n'ihi na emeela m ọtụtụ! Ọ bụụrụ m ihe mkpali dị ukwuu! Anọ m na ogbo n'ihu ndị ọka ikpe anọ Elio, Mika, Skin na Fedez na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 3000, na-ele m anya! Tupu m banye n’ọkwa ahụ, echetara m na m kpere ekpere, n’uche m. Agwara m Chineke ma jụọ ya: "Kwe ka m jiri ịhụnanya gị rute ndị mmadụ nso." Ihe kacha ju m anya bụ na ndị na - ege ntị lụrụ ọgụ maka m, na ha ekwenyeghị na ndị juri ahụ, ndị ọka ikpe akpọghachiri m n’ọgbọ ahụ. Ọ bụ m kacha mma ahụmahụ. Ihe kachasị mma nke m biworo. Ana m ekele Chineke, mana ana m ekele ya maka ndụ o nyere m. O nyere m amara ịghọta onyinye a nke ya. Onyinye nke m na-arịọghi ma o nyere m. Enwere m ekele maka ya maka ịhụnanya a, nke ọ na-enye m kwa ụbọchị. Were onyinye a kesara ndị ọzọ. Echere m na n'agbanyeghị onye ị bụ, ebe ị si, Chineke na-eme ihe ná ndụ gị. Chineke nwere uche, Nwanyị anyị kpọrọ m na Medjugorje na ndụ m agbanweela. Ma ọ na-ahapụ gị ka ị nwere onwe gị, ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ na-enye gị ohere ịgbanwe ndụ gị. Ndụ m agbanweela n'ihi na ekwewo m ka Chineke banye na ya. Ọ bụrụ na ị kwuo ee, Ọ nwere ike ọrụ ebube.
- did merieghị X-Factor, n'ezie na njedebe ha kpochapụrụ gị, agbanyeghị ị jisiri ike ịgba akaebe banyere Okwukwe gị, ọbụlagodi na gburugburu ebe ahụ. Otú ọ dị, nnukwu mmeri ị nwetara, Jospeh gị, bụ onye ị lụrụ nanị ụbọchị ole na ole. Ọchịchọ anyị, na mgbakwunye na inwe ihe ịga nke ọma dị ka onye ọbụ abụ, karịa ihe niile iji bụrụ ezigbo nne nke ezinụlọ ndị Kraịst, a chọrọ nke a. Daalụ!
Isi Iyi: La Croce Quotidiano - Nọvemba 2015